January 2022 - Myanmar Globe
သက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့ သမ္မတကို ရာထူးက မဆင်းဖို့ တနိုင်ငံလုံးက ဝိုင်းတောင်းပန်ရတဲ့ အဖြစ်
သက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့ သမ္မတကို ရာထူးက မဆင်းဖို့ တနိုင်ငံလုံးက ဝိုင်းတောင်းပန်ရတဲ့ အဖြစ် ( မအလ နဲ့တော့ အီးနဲ့ နံသာဆီ….) အီတလီနိုင်ငံသမ္မတကြီး Sergio Mattarella ဟာ သမ္မတရာထူးမှာ (၇) နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် နောက်ထပ် သက်တမ်းမတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့နေရာကို […]
နတ်ပြည်ကိုမြင်ဖူးသူက ငရဲပြည်ကိုရွံရှာမုန်းတီးသလို စစ်တပ်ကို မုန်းတီးနေဟု ဗိုလ်နဂါးပြော
နတ်ပြည်ကိုမြင်ဖူးသူက ငရဲပြည်ကိုရွံရှာမုန်းတီးသလို စစ်တပ်ကို မုန်းတီးနေဟု ဗိုလ်နဂါးပြော စစ်ကောင်စီသည် တိုင်းပြည်ကို အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရုံကလွဲပြီး အစစအရာရာ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖြင်းခဲ့သည့်အတွက် ပြည်သူများကသာ ဒုက္ခများကို ခါးစီးခံခဲ့ရသောကြောင့် နတ်ပြည်ကိုမြင်ဖူးသူက ငရဲပြည်ကိုရွံရှာမုန်းတီးသလို စစ်တပ်ကို မုန်းတီးနေဟု ဗိုလ်နဂါးကပြောဆိုသည်။ နွေဦးတော်လှန်ရေး တစ်နှစ်ပြည့် “ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့” အစီအစဉ် အပိုင်း (၁) […]
ရေဆာရင် ရေပဲသောက်ပါလို့ ဆရာဝန်တွေ သတိပေးတာ ဒါကြောင့်ပါ။ Figure 1 ဆီးချိုရောဂါနှင့်အချိုရည်ဘူးများ၏အန္တရာယ် ယနေ့ခေတ်တွင် ကလေးများမှလူကြီးများအထိ ကာဗွန်ဟိုက်ဒြိတ်ပါဝင်သောအချိုရည်များ၊ အားဖြည့်အချိုရည်များနှင့် ထပ်ပေါင်းသကြားများပါဝင်သောအအေးများ အစရှိသည်တို့ကို နေ့တိုင်းနီးပါး သောက်ဖြစ်နေကြပါသည်။ မိမိသောက်သုံးမိသည့်အချိုရည်၏သကြားပါဝင်မှုကိုသတိမထားမိဘဲ နေ့စဉ်နှင့်အမျှသောက်သုံးနေမည်ဆိုပါက သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ပမာဏများလာမည်ဖြစ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကယ်လိုရီပါဝင်မှုများသောကြောင့် နေ့စဉ်သောက်သုံးပါက ကိုယ်အလေးချိန်လျင်မြန်စွာတက်လာစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် […]
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ဘာသာစကားတွေထဲမှာ နံပါတ်တစ်အလှဆုံးအဖြစ် ဗိုလ်စွဲတဲ့မြန်မာအက္ခရာ
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ဘာသာစကားတွေထဲမှာ နံပါတ်တစ်အလှဆုံးအဖြစ် ဗိုလ်စွဲတဲ့မြန်မာအက္ခရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံတော်အလံတစ်ခုစီရှိသလိုပဲ အခြေခံဘာသာစကားတွေ အက္ခရာတွေသင်္ကေတတွေ လည်း အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ 8ရာစုတည်းက ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ Phoenician တွေခေတ်မှာတင်ပဲ အက္ခရာသင်္ကေတတွေဘာသာစကားတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာနေခဲ့ပြီလေ။ အဲ့ဒီနောက်ကနေ အီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့ ခေတ်ကာလမှာလည်း သင်္ကေတအင်္က္ခရာတွေနဲ့ ဘာသာစကားတွေ အမျိုးမျိုးကျယ်ပြန့်လာရင်း ဒီနေ့ခေတ်မှာဆို နိုင်ငံတိုင်းက သူ့ […]
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပတ်စ်ပို့တွေက သြဇာ အရှိဆုံးလဲ…?
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပတ်စ်ပို့တွေက သြဇာ အရှိဆုံးလဲ…? ပြည်ပ နိုင်ငံတွေကို ခရီးသွားလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ပတ်စ်ပို့လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ဟာ အရေးပါဆုံး မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် ပတ်စ်ပို့တွေကို စတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သူကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ပဉ္စမ ဟင်နရီ ဘုရင်ဖြစ်ပြီး အေဒီ […]
အသံတိတ်သပိတ်လုပ်မည့် ရက်တွင် မန်းစည်ပင်က နေ့ခင်းကြောင်တောင် စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲလုပ်ရန် စီစဉ်
အသံတိတ်သပိတ်လုပ်မည့် ရက်တွင် မန်းစည်ပင်က နေ့ခင်းကြောင်တောင် စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲလုပ်ရန် စီစဉ် မန္တလေး ၊ ဇန်နဝါရီလ – ၂၉ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင့်သည့် အသံတိတ်သပိတ်ပြုလုပ်မည့်နေ့တွင် မန်းစည်ပင်က နေ့ခင်းကြောင်တောင် စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်နေကြောင်း မြို့ခံများကပြောသည်။ စကစ လက်အောက်ခံ မန်းစည်ပင်က မြို့တော်ဝန်ဖလား ခေါင်းစဉ်ဖြင့် […]
ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်‌နေကြဆဲ ‌ရွှေမြန်မာတွေ နှင့် တနေ့ကြက်ဥ (၂) လုံး ဥအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ဂျပန်
ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်‌နေကြဆဲ ‌ရွှေမြန်မာတွေ နှင့် တနေ့ကြက်ဥ (၂) လုံး ဥအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ဂျပန် ဂျပန်တွေက ကြက်မတစ်ကောင်ကို တစ်နေ့ ၂ လုံး ဥအောင် လုပ်လိုက်ပြီ။ အောင်မြင်တယ်။ တစ်နေ့ ၂ လုံးဥတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့.. တစ်နေ့တာ ၂၄ နာရီကို တစ်နေ့ […]
“စစ်တပ်ဟာ ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရမှုကကင်းလွတ်နေသရွေ့ မြန်မာ မှာ တည်ငြိမ်မှုဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သပ်သပ်ပါပဲ” ဟု ကုလ လူ့အခွင့်အရေးအကြီးအကဲပြော
“စစ်တပ်ဟာ ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရမှုကကင်းလွတ်နေသရွေ့ မြန်မာ မှာ တည်ငြိမ်မှုဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သပ်သပ်ပါပဲ” ဟု ကုလ လူ့အခွင့်အရေးအကြီးအကဲပြော (ဘာသာပြန်) ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇန်နန်ဝါရီ ၂၉။ မြန်မာ့အရေးတွင် စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်များကို ဖိအားပိုပေးရန် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအား ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအကြီးအကဲက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး တစ်နှစ်နီးပါးကြာသည်အထိ မြန်မာပြည်သူများသည် ၎င်းတို့၏အသက်အိုးအိမ် နှင့် လွတ်လပ်မှုများကို […]
စစ်ကောင်စီက တရုတ်နှစ်ကူးရက်ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ မှာ ဆိုင်တွေကို မဖွင့်မနေရဖိအားပေးနေလို့ တရုတ်စီးပွားရေးအသိုင်းအဝန်းကြားထဲ အကြပ်ရိုက်ဒေါသထွက်နေ
စစ်ကောင်စီက တရုတ်နှစ်ကူးရက်ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ မှာ ဆိုင်တွေကို မဖွင့်မနေရဖိအားပေးနေလို့ တရုတ်စီးပွားရေးအသိုင်းအဝန်းကြားထဲ အကြပ်ရိုက်ဒေါသထွက်နေ ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၂ ပြည်သူတွေ အသံတိတ်သပိတ်လုပ်မှာ စိုးရိမ်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက တရုတ်နှစ်ကူးရက်ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှာ ဆိုင် တွေ အားလုံး မဖြစ်မနေဖွင့်ရမယ်လို့ ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် […]
အိုမီခရွန်တောင်မပီးသေးဘူး လာပြန်ပြီ NeoCoV နီယိုကိုဗစ် 🦠
အိုမီခရွန်တောင်မပီးသေးဘူး လာပြန်ပြီ NeoCoV နီယိုကိုဗစ် 🦠 ============= ဒီအပတ်ထဲမှာ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက NeoCoV အကြောင်းကို ဆေးသိပ္ပံဂျာနယ် BioRxiv journal မှာတင်ထားပါတယ်။ ဒီစာတမ်းကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့သေချာစိစစ်မှုတော့မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ်တချို့သတင်းဌာနတွေကတင်ပြီး လူတွေလန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ လန့်ဆို အခုလက်ရှိကိုဗစ်တောင်မပြီးသေးတာကိုး။ နီယိုသာလာရင်မလွယ်ဘူးလို့တွေးကြတာပေါ့။ ▪️ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ zoonotic ဖြစ်တဲ့အတွက် လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကြားကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ […]